Isi egwuregwu kachasị mma nke egwuregwu niile na nyiwe | Akụkọ akụrụngwa
Igwe okwu eji egwu egwu kachasị mma nke ọnụahịa na nyiwe niile
Egwuregwu vidio abụghịzi ihe ntụrụndụ dị mfe ezigbo ahụmahụ maka uche anyị, na aha pụrụ iche maka ọhụụ na ụda. Oge ọ bụla anyị na-enwe ọmarịcha eserese kamakwa nsonaazụ ụda ka mma. Mmetụta ụda ndị a agaghị agacha kpamkpam ma ọ bụrụ na anyị enweghị ezigbo ụda isi, ebe ọ bụ na ndị ọkà okwu na telivishọn na-ebutekarị na-adịkarị mediocre. Monitors ọbụna njọ na obere ohere maka ha.
Iji na-egwu naanị ya ma yana ndị enyi igwu egwu, ndị a tụrụ aro bụ ekweisi. Ee, ọ nwere ike ịbụ isi igwe na igwe okwu ejiri rụọ ọrụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike gee ntị na ụda egwuregwu vidio na ịkagbu mkpọtụ mkpọtụ ma nwee ike ịkọrọ ndị enyi anyị. Enwere ha ọnụahịa na aghụghọ niile, dị maka ikpo okwu ọ bụla, mana enwere ndị raara onwe ha nye karịsịa maka ikpo okwu, na-enye ụfọdụ arụmọrụ ma ọ bụ nha anya pụrụ iche. N'isiokwu a anyị ga-ahụ ihe maka m bụ ndị a tụrụ aro na ahịa dị ugbu a. Na-emesi ịdị mma, ọnụahịa na ikpo okwu ike.
1 Ihe na-erughị € 50
1.1 Ntụkwasị obi GXT 4376
1.3 Sonrons onye na -eme mkpọtụ
1.4 Mars Egwuregwu MH020
2 Site na € 50 ruo € 100
2.1 Sony - Gold Ikuku ekweisi
2.3 Igwe ihe nkiri Razer V2
Ihe na-erughị € 50
Ebe anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ iche iche nke Okpu agha nwere ọnụahịa ezi uche dị na ya na ogo karịrị nke ọmaỌbụna n’ihe banyere ụdị dị ọnụ ala, ha ga-eme ka ahụmịhe anyị kawanye mma n’etughị akpa anyị oke.
Ntụkwasị obi GXT 4376
GXT 4376s gosipụtara 50mm okwu dị ike na 7.1 gburugburu olu. Ha na-ewepụta ọkwa dị elu na ala, yana bass miri emi, maka ahụmịhe dị omimi. Ha nwere ọcha Ikanam ọkụ n'akụkụ nke ekweisi na-enye ezigbo mma mara mma. Ha na-etinye ihe nkedo dị nro na nke dị jụụ maka nnọkọ egwuregwu ogologo. Tụkwasị na nke ahụ, eriri isi na-edozi onwe ya ma na-enye ihe zuru oke. Naanị ihu ala m nwere ike ịchọta bụ nke ahụ naanị nwee njikọ USB yabụ na anyị agaghị enwe ike ijikọ ha ozugbo na onye njikwa PS4 ma ọ bụ jiri ha Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ.
Ha dakọtara na ha abụọ PC dị ka ọ dị na PS4 na XboX. Ọnụ ya ugbu a bụ € 39 Na nke na-esote njikọ.
Otu n'ime kọmpat na nkasi obi egwuregwu egwuregwu dị na ọnụahịa ego a. Ezigbo maka ogologo egwuregwu sessions na asọmpi n'ịntanetị. Ihe nkedo a na-agbanwe agbanwe ga-ekewapụ gị n'ihe ndọpụ uche ọ bụla ị nwere na igwe mbughari ga-ekwe ka iwepu ya dabere na ịchọrọ ya ma ọ bụ na ị chọghị. Ọ nwere ọkụ ọkụ LED nke enwere ike ịgbanwe site na ịgbanye ọkpụkpọ na okpu agha ahụ.
Play Kwekọrọ n'Ozizi na Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC na ngwaọrụ gam akporo na iOS. Currentgwọ ya ugbu a bụ 42,99 € Na nke na-esote njikọ.
Sonrons onye na -eme mkpọtụ
Fọdụ okpu agha a tụrụ aro ka ị kpọọ aha asọmpi dịka Akwadoro maka egwuregwu dị ka Halo 5 Guardians, Metal Gear Solid, Call of Duty, Star Wars Battlefront, EA Sports UFC, Overwatch, World of Warcraft Legion, PUBG, League of Legends .... Ha na-egosipụta ụda kristal doro anya nke nwere ezigbo nkwekọrịta 50mm magnet neodymium magnet ọkwọ ụgbọala. Mbughari, igwe na-akagbuo igwe okwu nke enwere ike igbanwe n’elu site na onodu ogo 120.
Ọ dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla nwere njikọ Jackm nke 3.5m na ha ọnụ na 45,99 € Na nke na-esote njikọ.
Mars Egwuregwu MH020
Ndị dị ọnụ ala na ndepụta ahụ ma jisie ike bụ isi okwu Mars. Nwa ergonomic nwere igwe okwu na njikwa nnweta dị mfe yana njikwa olu dị na eriri. Ha nwere dIadema na mpe mpe akwa na teknụzụ ikuku nke ejiri akpụkpọ anụ sịntetik kpuchie na micro-perforated na ume iku ume. Na Igwe okwu na-enwe ike ịpị apị na-enye ohere nkwukọrịta ngwa ngwa ma doo anya.
Kwekọrọ n'Ozizi na PS4, XboX, Mac, Nintendo switch, mbadamba, smartphones na ya ugbu a price bụ .9,99 XNUMX na nke a njikọ.
Obere ihe nwere ọgụgụ isi n'ihe gbasara imewe mana ejiri ego karịrị ọnụego edozi. Usoro ndị agha na-achịkwa ha ka ha bụrụ okpu kachasị amasị gị ma ọ bụrụ na ihe gị bụ agbapụ égbè dịka oku nke ọrụ ma ọ bụ agha. Site na ndakọrịta nke ụwa, igwe okwu nwere ike iwepụ, ọkụ ọkụ ọkụ, padded paded ntị, na isi eji edozi nke ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ mmikpu nke ọma na mbara igwe nke egwuregwu vidiyo.
Ha dakọtara na nyiwe niile n'ihi ya ha dị ọtụtụ na ọnụahịa ha bụ .20,99 XNUMX na nke a njikọ.
Site na € 50 ruo € 100
Ọ bụrụ na anyị nwere ego buru ibu ma chọọ ịme ka ahụmịhe anyị na-ege ntị gbakwunye mgbe anyị na-asọmpi ma ọ bụ naanị ịnụ ụtọ egwuregwu vidio anyị kachasị amasị anyị na mmikpu zuru oke, anyị nwere igwe okwu a 7.1 gbara ụda ịme anwansị nke ahụ agaghị eme ka anyị nwee ọ enjoyụ zuru oke, ọ ga-enyekwara anyị aka ịmata site n’otu ụzọ mgbagharị ọ bụla ma ọ bụ ụkwụ ọ bụla na-abịa.
Sony - Gold Ikuku ekweisi
O doro anya na nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ikpo okwu egwuregwu gị bụ PlayStation 4 a ma ama. Ha nwere ụda 7.1, ndụ batrị ogologo na profaịlụ ọdịyo akọwapụtara maka egwuregwu. Ha bụ ekweisi gọọmentị nke PS4, na ha dị ezigbo mma. Nlụpụta ya magburu onwe ya na nhazi ahụ dị ntakịrị. Mgbe ejiri ya na PS4 ma ọ bụ PS3, ị ga-enwe ụda gburugburu ya na nhọrọ iji họrọ ntọala ọdịyo ọdịnala. Ọ bụrụ na ibudata ngwa ekweisiisi site na Playlọ Ahịa PlayStation, ị ga-enwe ohere ụfọdụ profaịlụ egwuregwu ọdịyo egwuregwu ma ọ bụ ị nwere ike ịgbanwe ụda na mmasị gị. Maka akụkụ ndị ọzọ nke ụda ahụ ga-abụ ihe ngosi dị egwu mana na nhafu nhazi ahụ, ọ na-ezipụta ihe ị nyere ya maka egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla.
Ha dakọtara na nyiwe niile mana maka PS4 ha bụ nhọrọ kachasị mma na enweghị mgbagha ma ọ bụrụ na ị na-achọ nguzozi n'etiti ogo na ọnụahịa, dị maka ọnụahịa nke € 79,99 na nke a njikọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nke ọkara elu mma. Memory ụfụfụ ga-eme ka ha nwee ahụ iru ala ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ inwe ogologo oge egwuregwu. Da dị mma dị mma na ọnụahịa ya, ị ga-enwe ekele maka nkọwa ọ bụla. Igwe okwu unidirectional kachasị wee belata mkpọtụ ikuku iji melite ogo olu ma enwere ike ịdọrọ maka ojiji n'oge ọ bụla. Okpu agha ọ bụla na-agụnye njikwa olu na bọtịnụ ogbi maka mgbanwe na-elu. Nke n’eme ka ekwe ekwe ha di otutu.
Ha dakọtara na nyiwe niile ma nwee ọnụahịa nke .59,90 XNUMX na nke a njikọ.
Igwe ihe nkiri Razer V2
Isi ihe eji egwu egwu egwu na-egosi omenala 40mm ọkwọ ụgbọala. Site na igwe okwu nwere ike iwepụ, ị ga-anụ ụtọ imikpu na-enweghị ihe ndọpụ uche ma ọ bụrụ na ị na-egwu naanị. Ewubere maka nkasi obi na ntachi obi ya na mpempe akwụkwọ nke dị larịị dị larịị yana nke ọma etinyere akpụkpọ anụ. Ha nwere ezigbo mma na nchekwa nke ịnwe ngwa nke ụfọdụ ama ama n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Na-akpali akpali Virtual 7.1 gburugburu nke na-enye gị ohere ịmegharị ekweisi iji wepụta ahụmịhe ụda olu nke ahaziri iche.
Kwekọrọ n'Ozizi na niile nyiwe gụnyere consoles, PC ma ọ bụ mobile ngwaọrụ, ya price bụ .59,99 XNUMX na nke a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Igwe okwu eji egwu egwu kachasị mma nke ọnụahịa na nyiwe niile
Otu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri ma melite njikọ gị na egwuregwu vidiyo
Olee otu Skype zukọta ugbu a na-arụ ọrụ, ụzọ kachasị mma Ọbịbịa maka oku vidiyo